Umdlalo ka-Leo no-Aquarius - Ihambelana Astrological Signs
Umdlalo ka-Leo no-Aquarius
Ngaba i-Aquarius iyahambelana noLeo? U-Leo no-Aquarius banokuba yinto enomdla kwaye icelomngeniumdlalo wothando, kodwa ukuba omabini amaqabane azimisele ukulalanisa, le paring yothando inokwanelisa kakhulu. Ngelixa lonke ubudlelwane bunemiceli mngeni, u-Aquarius no-Leo banakho ukwenza abahlobo abalungileyo nabathandi.
ususa njani ivumba leekhemikhali kwimpahla entsha ngaphandle kokuhlamba
Ukuhambelana kukaLeo noAquarius
Umdlalo wothando ka-Leo no-Aquarius yinto enomdla kuba abanazinto ezifanayo. U-Leo unentliziyo enkulu,Womanziniunengqondo enkulu, kwaye bobabini banesimo esomeleleyo nesahlukileyo. Umtsalane wabo womelele womelele, kodwa xa bedibana, banokudanisa kunye, bazame ukulingisa omnye nomnye, babe ngumhlobo wabo, okanye babhengeze imfazwe evulekileyo omnye komnye, kodwa inye into abangenakufane bayenze kukungayihoyi enye enye.
Uyenza njani iLibra ukuwa ngothando
Xa uLeo kunye no-Aquarius bedibana okokuqala
U-Leo unokuzibuza ukuba i-Aquarian izifumana phi izimvo zabo 'ze-eccentric'. Umgcini wamanzi unokuzibuza ukuba kutheni uLeo ezigcwele kangaka. Intlanganiso yabo yokuqala inokuziva ingonwabanga, kodwa ayizukuthatha thuba lide ngaphambi kokuba bobabini banomdla kwaye babenomdla omnye komnye kwaye baqonde ukuba ukudibana kwabo kunokuba nakho ukubanomdla.
U-Leo no-Aquarius ukuthandana ukuhambelana
I-Leo kunye ne-Aquarius bobabini banobuntu kunye nabahlobo abaninzi. Ke, abantu kunye namaqela baya kuba kwi-ajenda xa i-Aquarian ne-Leo iqala ukuthandana. U-Leo uthanda ukuba i-Aquarian iyabavumela ukuba bathathe indawo esembindini, ngelixa i-Aquarian engakhathaliyo kunye neyona inomdla itsaleleka kwisimo sengqondo sika-Leo esonwabileyo somntwana, kwaye bobabini bayakonwabela ukuya kuzo zonke iindawo ezidumileyo kunye nokudibana nabantu abathanda ulonwabo nabanomdla.
U-Leo no-Aquarius ukuhambelana ngokwesondo
Zininzi iichemistry zesondo phakathi kwezi zimbini. I-Aquarian ilungele nantoni na, uLeo unomdla kwaye uyile, kwaye bobabini bangabathandi abazithembileyo abanokukhuthazana. Ngelixa ingesiso esona sibini sinenkanuko, ixesha abalichitha ebhedini liya kuba lula, libe mnandi, kwaye liqhume.
Imiceli mngeni enokubakho yokuBhangqwa kweLeo kunye neAquarius
U-Leo uyile ngokukodwa, kwaye i-Aquarian ngumbono. Ke, unokubona ngokulula ukuba kutheni aba babini befuna ukudibana. Nangona kunjalo, kuyakubakho imiceli mngeni ngenxa yomahluko wabo kunye nobume babo obudibeneyo obudibeneyo, obunokukhokelela ekubeni ngamnye abambeke kumjelo wabo kwaye bazise imfazwe evulekileyo.
Izitayile zothando ezahlukeneyo
Isixhobo esipholileyo esivela kubuntu buka-Aquarian sinokubeka uLeo ngaphandle. U-Leo luphawu olushushu kakhulu, olunothando, kwaye oluqhelekileyo, kodwa i-Aquarian ihlala ithathaindlela yokususa izandlaxa kufikwa kuthando. Nokuba aba babini bayayazi indlela abavakalelwa ngayo omnye komnye, lo mahluko ungabathintela ekufezekiseni ukusondelelana okunzulu.
Inzala eyahlukeneyo kunye neembono
I-Aquarian yingqondo; banomdla kwaye bayathanda ukuthetha ngento ebalulekileyo kwisikimu esikhulu sezinto. U-Leo unomdla ngakumbi kwilizwe labo elincinci, bonwabele iincoko ezisuka entliziyweni, kwaye bahlala bekhutshiwe ngokwasengqondweni kwiimpembelelo zangaphandle. Umdla kunye nemibono eyahlukeneyo ye-Leo kunye ne-Aquarian inokudala imeko apho banokunxibelelana ngokuncinane malunga.
Iindidi eziphambili ze-Ego
Omnye umba ujikeleze i-Leo's ego kufuneka ibe liziko lokuqwalaselwa kwaye ulindele ukuvela kwabanye. Umntu wase-Aquarian, onesidingo sakhe sokubona wonke umntu elingana, uya kuba nexesha elinzima lokujongana notyekelo lukaLeo lokuphatha abanye ngendelelo. Ngelixa uLeo eza kuba nzima ukujongana notyekelo lwe-Aquarian lokubaphatha njengaye wonke umntu.
U-Leo no-Aquarius banjaloyomibini imiqondiso,Oko kuthetha ukuba bonwabile xa benesicwangciso kwaye belawula ubomi babo. Ukongeza, i-Leo kunye ne-Aquarian bobabini banezimvo ezomeleleyo kuyo yonke into-ukusuka apho baya khona, apho bahlala khona, ukutya, abaphi abahlobo abaza kuchitha ixesha nabo-kwaye ukuba izimvo zabo zahlukile, bazokuthini, zinokuqala umlo Ngokuqhwanyaza kweliso.
Leo, Aquarius, kunye nomona
Ngaphandle kwako konke ukwahluka kwabo, uLeo unokuvula i-Aquarian ukuya kuthando abangazange baziva ngaphambili. Uthando luka-Leo alunabugovu, lunesisa, kwaye luyaphapha, lunokufudumeza intliziyo ye-Aquarian. Oku, nangona kunjalo, kunokwenza umona ube yingxaki. U-Leo udlala ngothando ngendalo, kwaye i-Aquarian iphatha wonke umntu ngendlela efanayo nomphatha ngayo umthandi wayo ka-Leo. Ngaphandle kokuba aba babini bafunde ukulawula umona wabo, imilo abanayo inokubangela ukuba uthando lwabo oluvakalayo luphele.
Ukwenza ulwalamano lusebenze
U-Leo no-Aquarius banokwenza ulwalamano oluyimpumelelo kwezothando, kodwa elowo kuya kufuneka enze isibonelelo esaneleyo somahluko wabo. Ukuba ngamnye unokuqonda, athande, kwaye akuxabise oko kuziswa ngomnye etafileni kwaye angazami ukuzitshintsha, uthando abanalo omnye komnye lungatshintsha nganye ngeendlela ezingacingelwanga.
U-Leo onekratshi unokukhuthazwa bubuchule bama-Aquarians obunqabileyo bokuqhekeka kwindibano, funda ukungakhathali kangako malunga nokuba abanye bacinga ntoni, kwaye ube novavanyo ngakumbi.
Kubukho be-Leo ekhanyayo, i-Aquarian inokufumana ukuzixabisa njengabantu abahlukileyo kwaye ikhethekileyo kwaye ikulungele ngakumbi ukungena kwindawo ebonakalayo.
Nangona kunjalo, ukuze oku kubhangqwa kusebenze ixesha elide, uLeo no-Aquarius kufuneka bafunde ukudanisa kunye njengabantu ngabanye. Ukuba banokukwenza oko bobabini, eyabo inokuba yinto enomdla, edlalayo, enobuchule kunye nolwalamano oluhlala luhleli.
Ilanga leNkwenkwezi liPhakathi
Yonke i-Leo kunye ne-Aquarius yahlukile, inxulumene nolunye uphawu lweplanethi ekubekweni kwitshathi yokuzalwa. Kodwa, uphawu lweLanga lusembindini kubuntu bomntu ngamnye, kwaye iimpawu zalo ziya kubonakala kwinqanaba elikhulu okanye elincinci kubudlelwane babo.
ULeo nguuphawu lomlilo lomntukwaye konke malunga nam, Me, Me! U-Leo utshatile ukuba ngoobani, ufumane ukuzithemba kuloo nto, uthathe ubomi bakho, kwaye ujolise kubuhlobo bakho kunye nokonwaba. Banamandla apheleleyo elanga, umlawuli wabo, kwaye banobuntu obukhulu, obuqaqambileyo nobunobuhlobo. Ewe, nokuba noLeo oqaqambileyo noqaqambileyo anganakhoicala elimnyama.
U-Aquarius nguuphawu lomoya jikelele, elawulwa lixesha elizayoiplanethi u-UranusnoSaturn umphathi. AnU-Aquarian uthanda izinto ezingathandekiyo, une 'sonke sisinye' sithatha ubomi. Bajongile, batshatele ekwakheni ikamva eliqaqambileyo lomntu wonke, kwaye bajolise ekwenzeni ubuhlobo nabantu abafana nabo, abanomdla wokuqhubela phambili ilizwe. Nangona kunjalo, njengoLeo, i-Aquarian nayo inokuba nayoicala elimnyama.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi, uthando kunye nokuhambelana
NgelixaUthando lwelanga luhambelana nokuhambelanainokonwabisa kwaye ifundise, inokulahlekisa.Ukuvumisa ngeenkwenkwezi akunakondikuxelele ukuba uza kuthandana nabani. Xa befuna ukuhambelana phakathi kwabantu ababini abathandanayo, abavumisi ngeenkwenkwezi abahlolisisi nje iimpawu zelanga, bajonge unxibelelwano oluqinisekileyo phakathiInyanga,UVenus, iplanethiyothando,UMars, iplanethingesondo, kunye neplanethi iSaturn, yokuphila ixesha elide, phakathi kweetshathi ezimbini nokunye okuninzi. Ukuhambelana kweenkwenkwezi yinkqubo entsonkothileyoebizwa ngokuba yi-synastry.
Malunga Iincwadi Zabantwana Autism Izixhobo I-Disney Children's Iifilimu Iiproteni Source For Vegetarians Umyili Izikhwama
ezona dolophu zincinci zisecalifornia ukuthatha umhlala-phantsi
abonakala njani amaqanda e -fishfish
Chaza into oyigcwalisa ngomoya
ususa njani ukungunda kwiimpahla
I-taurus yowesifazane kunye nokuhambelana kwendoda kunye ne-capricorn